1524 days ago	(http://nineninesanay.blogspot.com)
ကျွန်မ ၁ဝနှစ်.... ကျွန်မ အိတ်ကပ်ထဲ သူထိုးထည့်ပေးတဲ့ ချိုချဉ်က တစ်ခြားမောင်နှမတွေထက် ပိုများခဲ့တယ်။ကျွန်မ ၁၃နှစ်.... အလယ်တန်းစတက်တဲ့ ကျွန်မကို ၂မိုင်ကျော်လောက် လမ်းလျှောက်ပြီး သူ ထမင်းပို့ပေးခဲ့တယ်။ကျွန်မ ၁၆နှစ်.... တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်တဲ့ ကျွန်မကို မောင်နှမထဲက အလိမ္မာဆံ	read more » Discuss Add this link to... Bury
နိုင်ငံတကာအခြေအနေ ----( ဂျပန် )
ဒုတိယ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ သမိုင်း ကြောင်း နှင့် ယနေ့ ဂျီ အိပ် ဟုခေါ်သည့် ကမ္ဘာ့ ထိပ်သီး စက် မှု နိုင်ငံ များ အကြောင်း ဆက်ရေးမည်ကြံသော အခါ ဂျပန်နိုင်ငံ အကြောင်း ရေးမိ သည် -- ဂျပန်နိုင်ငံသည် အာရှ တွင် အကြီးဆုံး စက်မှုနိုင်ငံကြီး ဖြစ်သည့်အပြင်--ယနေ့မျက်မှောက် ကာလ တွင်--အာစီယံ နိုင်ငံများ က ဂျပန် ၏ ခြေလ	read more » Discuss Add this link to... Bury
1528 days ago	(http://nineninesanay.blogspot.com)
ခင်ပွန်းတစ်ခါတလေမှာ သူဟာ ကလေးဆိုးကြီးနဲ့ တူတတ်တယ်။ရုံးဝတ်စုံကို ချွတ်ပြီးနောက် သူ့ပုံစံကို တစ်မျိုးပြောင်းခွင့်ပေးလိုက်ပါ။သွားတိုက်ဆေးဗူးကို လုံအောင်မပိတ်တတ်တဲ့ သူ့ကို ဗွေမယူပါနဲ့။သွယ်ဝိုက်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးမှ ကိုယ့်မွေးနေ့ကို မှတ်မိတတ်တဲ့သူ့ကို ခွင့်လွတ်နားလည်ပေး	read more » Discuss Add this link to... Bury
နိုင်ငံတကာ အခြေအနေ ---( ရုရှား )
1528 days ago	(http://feedproxy.google.com)
၁၉၁၇ ခုနှစ် မဟာအောက်တိုဘာ ဆိုရှယ်လစ် တော်လှန်ရေးကြီး အောင်ပွဲခံပြီးခဲ့သည့် အချိန်မှ စပြီး အုတ် မြစ် ချ တည်ဆောက်လာခဲ့သည့် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ သည် ၇၅ နှစ်နီးပါးမျှ စစ်ရေး-နိုင်ငံရေး-စီးပွားရေး-အင်အားကြီး မားလှသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီး တနိုင်ငံအဖြစ် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်နယ်ချဲ့ စနစ် နှင့် ကိုလိုနီ read more » Discuss Add this link to... Bury
Free File Hosting Script: XtraUpload
1527 days ago	(http://feedproxy.google.com)
XtraUpload isafree file hosting script for anyone willing to createaservice similar to Rapidshare.com or Megaupload.com.It is written in PHP (CodeIgniter Framework) & uses MySQL for storing data.The script is also an e-commerce platform as you can offer both standard-free read more » Discuss Add this link to... Bury
Myanmar Actor and Model Boy, Ye Tite, One of the rising star of Myanmar filming industry
1527 days ago	(http://www.myanmarcelebrity.com)
Myanmar Actor and Model Boy, Ye Tite is	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: Myanmar Actor and Model Boy, Ye Tite is">
Microsoft Web Platform (Installer & Gallery)
Few months ago,apost at WRD was sharing the Microsoft Web Platform.Yesterday, Microsoft announced the new features in Web Platform, which are:Microsoft Web Platform Installer 2.0 BetaWeb Application GalleryThe Web Platform aims to beacomplete ecosystem read more » Discuss Add this link to... Bury
Phuket Part (5)
Phi Phil island က အပြန် Hotel ရောက်တာနဲ.ေ၇မိုးချိုးပြီး။ ဗိုက်လဲ ဆာလာတာနဲ. ညစာ စားရင် အပြင်ထွက်ကြရပါတယ် ညစာ စားပြီး တော့ အချိန်က ည ၉ နာရီ ထိုးနေပြီ။ စားသောက်ပြီး အပြန် ပထမနေ. က လူစည်ကားလှတဲ့ တိုင်ပတ် ကနေကြတဲ့ လမ်း ကိုဝင်မယ်အလုပ်။ ရုတ်တရတ် လေတွေ တဝေါဝေါ တိုက်လာတယ်။ မိုးတွေ ကျလာတယ်။ ဒီတော့ အသားကုန်.	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: | Bookmarks « previous1...234567891011...105 next »